Kulan Waynihii Labaad Ee Meles Foundation Oo Saaka Kafurmay Hoolka Xarunta Midowga Afrika Ee Caasimada Addis Ababa - Cakaara News
Kulan Waynihii Labaad Ee Meles Foundation Oo Saaka Kafurmay Hoolka Xarunta Midowga Afrika Ee Caasimada Addis Ababa
Addis Ababa(CN) Jimce.July.10.2015, shirkii caadiga ahaa ee Meles Zinawi Foundation ayaa saaka ka furmay hoolka shirarka xarunta midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa, waxaana kasoo qayb galay gudoomiyaha Males Foundation marwo Azeb Masfin, Raysal wasaaraha DFI mudane Hailemariam Desalegn, afhayeenka golaha federeeshinka ahna gudoomiye kuxigeenka foundationka, gudiga fulinta oo uu kamidyahay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, golaha dhexe iyo dhamaan xubnihii Foundationka.
Shirka labaad ee golaha ayaa maanta lagusoo bandhigay warbixintii foundationka iyo ajendayaal ay kamid ahaayeen istaraatiijiyadaha hogaamiyihii aragtida dheeraa Males Zinawi ee horumarinta cagaaran iyo barnaamijyadiisii siyaasadeed sidii loo hirgaliyay.
Gudoomiyaha Foundationka marwo Azeb Masfin oo halkaasi khudbad dheer kasoo jeedisay ayaa sheegtay in uu maanta Males Zinawi aad u farxi lahaa hadii uu arki lahaa midhaha istaratijiyadihiisii oo dhaqan galay iyadoo hada laga joogo muddo 3 sano ah.
Raysal Wasaare HaileMariam Desalegn ayaa sidoo kale halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysay kasoo jeediyay taasoo uu kaga hadlay sida ay guud ahaanba Afrika uga hirgashay barnaamijkii siyaasadeed iyo kuwii horumarineed ee hogaamiyihii argatida dheeraa ee Meles Zinawi.
Madaxwayne Cabdi Maxamuud Cumar oo kamid ah gudiga sare ee Foundationka ayaa mar ay warbaahintu wax kawaydiisay shirkan labaad ee golaha founadtionka sheegay in looga hadlay laguna soo bandhigay warbixintii wax qabadkii foundationka ee barnaamijyadii horumarineed.
Dhanka kale Suldaan Khadar Maxamuud oo ah waxgaradka DDSI ayaa shirkan u qaabilsanaa odoyaal dhaqameedka dalka, wuxuuna halkaasi kasoo jeediyay khudbad dhaxal gal ah oo golihihii foundationka aad u soo jiitay taasoo uu kaga hadlay siday ahaan jirtay Itoobiyadii hore, sida ay maanta tahay Itoobiyada cusub iyo isbadalka lagaadhay ee ay hormuudka u ahayd EPRDF iyo hogaankii aragtida dheeraa ee Meles Zinawi.
Shirkan oo maanta labada galinba socday ayaa sidoo kale waxaa lagu ansixiyay xubno cusub oo foundationka kamid ah kuwaas oo deegaanka Soomaalida xubno cusub loogu daray. Faahfaahinta shirka iyo wixii kale ee kasoo baxay waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkayaga xiga haduu Eebe raali kanoqdo.